ZX ụdịdị dị iche iche na-esote Laptọọpụ, ọhụụ ọhụrụ maka ndị chọrọ ịrụ ọrụ | Akụrụngwa n'efu
ZX ụdịdị dị iche iche na-esote Laptọọpụ, ọhụụ ọhụrụ maka ndị chọrọ ịrụ ọrụ
Ochie hụrụ hụrụ Free Hardware a dị ike na ngwá agha na-agbake ochie game consoles na ochie Ngwa na-agaghịkwa arụpụtara. Ma o kwewokwa ka ụdị egwuregwu egwuregwu ọhụrụ mepụtara site na consoles ochie, dị ka ZX Spectrum Next Laptop, ụdị ahaziri iche nke ochie ZX Spectrum.
Ihe ịga nke ọma nke Nkwupụta nke ọhụụ ọhụụ ZX dugara onye okike nke Laptọọpụ Laptop ZX na-esote ịrara onwe ya nye n'ịmepụta ụdị a. Maka owuwu ya ọ chọrọ naanị bọọdụ Rasberi Pi Zero, onye nbipute 3D na ọtụtụ echiche. Ihe si na ya pụta bụ laptọọpụ na-ele anya na-arụ ọrụ nke ọma ma na-arụ ọrụ abụọ dị ka ihe egwuregwu egwuregwu egwuregwu.
The interface nke a ọhụrụ njikwa anya yiri ochie ZX ụdịdị dị iche iche na a ga-egwu egwuregwu vidio nke ihe njikwa a na ZX Spectrum Next Laptọọpụ n'ihi emulator o nwere. Bịanụ, n'eziokwu ọ naghị agbanwe ọtụtụ site na ọrụ ndị ọzọ: isi ya ka bụ Raspberry Pi, mana ikpe ahụ gbanwere iji mepụta gadget ahụ.
ZX ụdịdị dị iche iche Laptọọpụ ọzọ nwere Rasberi Pi Zero, a nnọọ ike ma oké ìhè SBC osisi nke ga-ekwe ka anyị na-enwe iji na-agba ọsọ ọ bụla video egwuregwu emulator.
Emere atụmatụ nke Lapstop ZX Spectrum na-esote site na mmemme mmemme wee bipụta ya na ngwa nbipute 3D. Enwere ike inweta atụmatụ site na profaịlụ Dan Birch na ebe nchekwa 3D dorchester. Usoro okike di nfe ma buru onye nbipute 3D, Ọ ga - ewe naanị minit ole na ole iji nweta laptọọpụ mbụ a nke nwekwara ọrụ njikwa egwuregwu.
Onwe m na-ahụ ya na-adọrọ mmasị, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ igwu egwu ZX Spectrum, ikekwe ihe kachasị mma bụ ụdị njikwa ọhụrụ, ihe na-arụ ọrụ nke ọma ma dịkwuo njikere maka ndị hụrụ egwuregwu vidiyo. Not cheghị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ntu Pi » ZX ụdịdị dị iche iche na-esote Laptọọpụ, ọhụụ ọhụrụ maka ndị chọrọ ịrụ ọrụ